Kedu ihe nchịkọta EPEL? | Site na Linux
Kedu ihe nchịkọta EPEL?
Isaac | | Nkesa
Heard nụla ihe banyere ya Ihe ngwugwu EPEL mgbe ọ bụla, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị si Fedora ụwa, ma ọ bụ Red Hat ma ọ bụ CentOS, ebe ị nwekwara ike ịmegharị maka ụdị nchịkọta ndị a. Nke a bụ ngwugwu maka ụlọ ọrụ yana aha ya sitere na Extra Packages Enterprise Linux. Ọ bụ otu ndị obodo Fedora na-emepụta ha, na-echekwa ma na-achịkwa ha.
Ọ bụ otu nhọrọ nke ngwugwu dị elu maka nkesa ndị ezubere maka ebe azụmahịa, gụnyere RHEL na CentOS dị ka m kwuru ebe ọ bụ na nke mbụ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ nke Fedora na CentOS bụ ndụdụ ọnụọgụ abụọ nke RHEL. Na mgbakwunye na distros ndị a, ị nwekwara ike ime ka EPEL repos na ihe ndị ọzọ, dị ka Scientific Linux (nke CERN's CCentOS), na ndị ọzọ ...
Ndị mmepe obodo ewerela ya n’aka ha ịpịpụta ngwugwu EPEL ka ọ bụrụ mgbe esemokwu n'etiti ha ma ọ bụ dochie nchịkọta nke ụlọ ọrụ distros. Nke a ga - enye ike na nkwụsi ike dị ukwuu maka ụdị ngwa ndị a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya i nwere ike chọta enyo ebe a ma ọ bụ enyo sava nke EPEL ndị a.
Enwere ụdị dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị oge ochie, dị ka:
EPEL 4 na 5: Ihe ndị a adịla ugbu a.
EPEL 6: maka i386, x86-64, na PPC64 architectures. Ọ ga-abịa na njedebe na 11, 2020.
EPEL 7: maka x86-64, ARM64 na PPC64 ụkpụrụ ụlọ.
EPEL 8: bụ mbipụta kacha ọhụrụ nke EPEL, maka x86-64, PPC64LE, ARM64 architectures na maka IBM s390x, na-enyekwu ngwugwu maka ọhụrụ na RHEL 8.0 ọhụrụ, yana n'ezie Fedora na CentOS 8.0.
Ị nwere ike nweta ozi ndi ozo banyere ha na nke a peeji gọọmentị nke ọrụ Fedora na-enye, ọ bụ ezie na ebe a ha emelighi ọdịnaya ahụ maka oge ahụ, ọ na-egosi naanị ụdị EPEL 7 dị ka ihe kachasị ọhụrụ ...
Iji mee ka ya, i nwere ike iji:
Ma gosipụta ndepụta nke nkwụghachi iji jiri:
Ọ ga-apụta na ndepụta akara dị ka epel. Na ya chọọ nchịkọta ndị ị chọrọ ma wụnye ha dịka ị maara na njikwa ngwugwu gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Kedu ihe nchịkọta EPEL?
Emeputara ohuru nke git 2.23, ya na ihe omumu ohuru
VPN: Kedu ihe ọ bụ na olee otu m ga - esi họrọ nke kachasị mma maka mkpa m?